Izindaba - Izinzuzo Zokusebenzisa i-Ductile Iron njengezinto ze-Valve
Izinzuzo Zokusebenzisa i-Ductile Iron njengezinto ze-Valve
I-ductile iron ilungele izinto ze-valve, ngoba inezinzuzo eziningi. Njengensimbi yensimbi, i-ductile iron yathuthukiswa ngo-1949. Okuqukethwe yikhabhoni yensimbi yensimbi kungaphansi kuka-0.3%, kuyilapho okwensimbi yensimbi ne-ductile iron okungenani kungu-3%. Okuqukethwe kwekhabhoni yensimbi ephansi kwenza i-carbon ekhona njenge-graphite yamahhala ukuthi ingakhi ama-flakes. Ifomu lemvelo lekhabhoni ensimbi yensimbi ngama-graphite flakes amahhala. Ngensimbi ye-ductile, i-graphite isesimweni samaqhuqhuva hhayi ama-flakes njengakwi-iron iron. Uma kuqhathaniswa nensimbi yensimbi ne-cast cast, i-ductile iron inezakhiwo ezingcono zomzimba. Yizigaxana eziyindilinga ezivimbela ukwenziwa kwemifantu, ngaleyo ndlela zinikeze amandla okuthuthuka anika ingxubevange igama layo. Kodwa-ke, i-flake yensimbi yensimbi iholela ekushodeni kwe-iron. I-ductility enhle kakhulu ingatholwa yi-matrix ye-ferrite.
Uma kuqhathaniswa nensimbi yensimbi, i-ductile iron inezinzuzo ngokuphelele ngamandla. Amandla wokuqina wensimbi ye-ductile angama-60k, kanti leyo yensimbi engu-31k kuphela. Amandla wokuvuna we-ductile iron angama-40k, kepha i-iron esetshenzisiwe ayikhombisi amandla esivuno futhi izogqashuka ekugcineni.
Amandla wensimbi e-ductile aqhathaniswa nawensimbi eyakhiwe. I-Ductile iron inamandla aphakeme kakhulu wesivuno. Amandla wesivuno aphansi kunawo wonke we-ductile iron angama-40k, kanti amandla esivuno sensimbi yensimbi angama-36k kuphela. Ezinsizeni eziningi zikamasipala, ezinjengamanzi, amanzi anosawoti, umusi, ukumelana nokugqwala nokumelana ne-oxidation yensimbi ye-ductile kuphakeme kakhulu kunalokho okwenziwe ngensimbi eyakhiwe. I-ductile iron yaziwa nangokuthi i-spheroidal graphite iron. Ngenxa yesakhiwo se-spheroidal graphite microstructure, i-ductile iron iphezulu ukwedlula insimbi ekunciphiseni ukudlidlizela, ngakho-ke kufaneleka kakhulu ekunciphiseni ukucindezeleka. Isizathu esibalulekile sokukhetha i-ductile iron njengempahla ye-valve ukuthi inezindleko eziphansi kune-cast cast. Izindleko eziphansi zensimbi ye-ductile zenza le nto ithandwe kakhulu. Ngaphandle kwalokho, ukukhetha i-ductile iron kunganciphisa izindleko zemishini.